I-Cook Islands Offshore Asset Protection Trust
I-Cook Islands Trust inikela ngamandla ekuvikelweni kwempahla emhlabeni wonke. Itholakala eningizimu yeHawaii, iziqhingi zaseCook ziye zafakazela kaningi ukuthi zinomlando wamacala okuvikela impahla. Wonke amacala lapho kubekiwe inselelo khona, impahla yeklayenti ivikelwe. Nasi isibonelo. Ngubani onamandla okuphikisana nomthetho? Abaningi bangasho ukuthi uHulumeni wase-United States. Kube nezigameko ezimbili lapho uHulumeni wase-US ezame khona ukuphoxa ukwethenjwa. Kuzona zozimbili lezi zigameko, uhulumeni ulahlekelwe yimali futhi izimpahla zahlala zivikelekile ethembeni.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi besingeke ngenze ngamabomu trust trust yokuvikela impahla ukugcina izimpahla zikude noHulumeni wase-US. Ngakho-ke simane siphawula iqiniso ukubonisa amandla aleli thuluzi elisemthethweni. Ngakho-ke, asisusebenzisi umuntu kufanele asebenzise imoto enjalo ngale ndlela.
Indlela I-Cook Islands Trust Esebenza Ngayo
Nakhu ukuthi i-Cook Islands Trust isebenza kanjani kahle. Ophikisana naye kwezomthetho uncenga inkantolo ukuthi ikufune, "Phendulela imali." Ngakho-ke, ngokubambisana ubhalela umphathiswa incwadi ubazisa ukuthi uyalelwe ukuthi ubuyise imali. Ugcina ikhophi yencwadi nenombolo yokulandelela bese ukhombisa ijaji olithobele. Umphathi, ngakolunye uhlangothi, kudingeka ukuthi ahambisane nemiyalo ebhalwe encwadini yetayitela i-Cook Islands Trust. Kuyithemba lokuvikela impahla. Ngakho-ke, sifaka i- "duress clause" ethembeni. Isigaba somthetho sithi umphathiswa wenqatshelwe ukukhipha izimali lapho ozuzi ephoqelelwa ukuthi enze ngokomyalelo wenkantolo.
Ngakho-ke umphathiswa, ohlala ngaphandle kwezwe lakho futhi ongaphandle kwenkantolo yakho, ngeke abambisane. Uvikelwe ekulimaleni ngoba uthobele ngokuphelele imiyalo yejaji. Okusho ukuthi, ucele umphathiswa ukuthi abuyisele imali. Ngakho-ke, usesimweni lapho uthobele ngokuphelele imiyalo yejaji. Umphathi, nokho, akazange, okuyindlela evikela ngokusemthethweni esemthethweni.
Kusetshenziswa ukuthembana okukude nolwandle kuyafana nomnikazi webhizinisi osungula inkampani eNevada noma eDelaware. Uyokwenza njalo ngenxa yemithetho yabo ephakeme, kunokuba asungule inkampani kwelinye izwe. Ukusetha ukuthembeka eziQhingini zaseCook noma kolunye uhlangothi olufanelekile ukuze uzuze emithethweni yabo emihle kuyefana. Kuyindaba yokukhetha amandla nemithetho engcono kakhulu yesimo sakho.
Ngazi kanjani ukuthi ngingabethemba umphathiswa weCook Islands?
Okokuqala, umphatheli akadingi ukuthi angenelele kuze kube kwenzeka "into embi". Okwesibili, akukaze kube nomphathiswa othathe izimali zamakhasimende. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumeni waseCook Islands ukhetha ngokukhethekile ukuthi ngubani amvumela ukuba abe nelayisense labaphatheli. Ngaphezu kwalokho, bavikela kanzima imboni yezinsizakalo zezezimali. Lawa mathuluzi wezomthetho awumthombo omkhulu wemali esifundeni. Ngakho-ke, abaphatheli banamalayisense, ahlolwe njalo futhi aqashwe ngeso lokhozi. Okwesithathu, inkampani yomshuwalense ibopha ama-trustee, ngakho-ke izimali ozethembayo zinomshwalense. Ngaphezu kwalokho, khumbula ukuthi usungula leli thuluzi elisemthethweni ukuvikela izimpahla ekumangalelweni okungenamthetho nokungalawuleki.
Ngakho-ke, ungathanda yini ube nethuba elingu-100% lokuthi imali yakho ithathwe yizinkantolo? Noma ungathanda ukuthi ube nomphathiswa onelayisense, onebhondi, ongakaze athathe imali yekhasimende enze lokho obakhokhele kona: ukuvikela imali yakho. Futhi, sisebenzisa inkampani ethembekile esondele eminyakeni engamashumi amane ubudala.
Ngaphambi kokuthi “into embi” yenzeke, nguwe odonsa izintambo. Nguwe ophethe ama-akhawunti asebhange, njll. Sakha inkampani ekhokhelwa isikweletu esilinganiselwe kude (LLC), esiqhingini saseCaribbean seNevis ngoba lo mthetho unikela ngokuvikelwa kwempahla okuphezulu. I-trust ingumnikazi we-100% ye-LLC. Ungumphathi we-LLC. Ama-akhawunti asebhange aphethwe ku-LLC. Uyisiginesha kuma-akhawunti asebhange.
Ngakho-ke, ukubuyekeza, i-trust ingumnikazi we-offshore LLC. Ungumphathi we-offshore LLC. Ugcina ukulawula okusayindayo kuma-akhawunti asebhange.
Lapho "Into embi" Yenzeka
Lapho kwenzeka “into embi”, abaphathi bayangena ukuze bavikele wena futhi bakubeke esikhundleni sokuba umphathi we-LLC. Ngakho-ke, lapho uyalwa ukuba ubuyise imali, umphathiswa, ohlala ngaphandle kwezwe futhi ongaboshelwa yizidingo zenkantolo yangakini, uqapha ama-akhawunti akho.
Ukuphinda futhi, ukuphepha kwezezimali nokuthula kwengqondo yeklayenti, okuwukuphela kwesikhathi lapho abaphathi bezezimali ngokuvamile bangene lapho izinkantolo zingathatha imali yakho. Ngakho-ke, njengoba kushiwo, kungcono ukuphathisa imali yakho kuthuluzi elingokomthetho elivikele izikhwama zekhasimende ngaso sonke isikhathi kunokuba li 100% liqiniseke ukuthi umphikisi wakho osemthethweni uzobaleka ngengcebo yakho ayithole kanzima, ngeke uvume ?
Uma "into embi" ihambile intambo yokulawula, abaphathi be-LLC, babuyela kuwe futhi ubuyile esihlalweni somshayeli kuzo zonke izimali zakho ekusebenzeni kahle. Uma uphakathi kwe-duress yezomthetho, umphathi wakho angakwazi ukukukhokhela izikweletu. Bangakwazi ukudlulisela imali kubantu obethembayo, abazokunakekela, njll., Unakekelwa ngokwezezimali, kepha abaphikisi bakho ngeke bakwazi ukuthola imali yabo. Umphumela uba ukuthi imali oyisebenzele futhi oyisebenzele iphephile futhi iphephile.
Ithuluzi Lokuvikelwa Kwempahla Elikhulu
Uthola ithuba elilodwa kulomhlaba. Ngakho-ke, ukujabulela ukuvikelwa esikhuluma ngakho lapha kudinga isenzo sakho. Yenza ukwethenjwa kusungulwe. Faka imali yakho kuyo. Sibonile amaklayenti amaningi asibonga kakhulu ngokusisiza sijabulele izinzuzo zale nketho futhi sigcina yonke into ebesebenzele yona. Ngakolunye uhlangothi, siphinde sabona amaklayenti alahlekelwa yikho konke ngokukhubazeka kokuhlaziywa.
Kunamaqembu athile azithandayo, njengalawo womsebenzi wezomthetho ongakhokhelwa uma izimpahla zakho zivikelwe, ozozama ukukuvimba ukuthi usethe ukwethenjwa. Bangazama ukukuthusa futhi bakhombe amanye amacala angavamile lapho ijaji lingazange lilandele umthetho lapho abazuzayo bethenjiswa ngale ndlela. Lokho abahlikihli bazohluleka ukukutshela yindaba yonke. Endabeni ka-Anderson, ngokwesibonelo, ukuthembeka kwamiswa okungalungile. Ummeli owabeka le trust wenza amaklayenti akhe bobabili abahlomuli be-trust nabavikeli be-trust.
Lokhu bekuyiphutha lobuwula engxenyeni yommeli ngoba kubeka ozuzayo esikhundleni esengeziwe sokuba nethonya ekushintsheni kwabaphatheli kanye nalabo abazuzayo. Ijaji lithe bona ngoba abahlomulile futhi ngabavikeli ukuthi bazidalele bona bona bangakwazi ukwenza okuthile. Izindaba ezimnandi kakhulu zokuthi leli cala laliwubufakazi obumangalisayo ukuthi noma ngabe icala lalimiswe kabi kangakanani, trust yayivikela impahla yekhasimende.
Amacala Ayingxenye Yempilo
Yonke ingadi inezimbungulu zayo nokhula. Ngakho-ke, yonke ingadi kufanele yethulwe. Ukungacabangi kanjalo kuyize. Ukunakekela ingadi kuthatha isenzo. Ukuvikela imali yakho akuhlukile. Udinga ukuthatha isinyathelo ukuvikela ingadi yakho yezezimali noma izimbungulu nokhula ezisemthethweni zizothatha izintambo. Ukuze ugcine ingadi enempilo, kudingeka isinyathelo.
Isivikelo esiqine kunazo zonke esizinikezwa yimali ethembekile yimali ewuketshezi egcinwe ku-akhawunti yasebhange ephephile yomhlaba wonke. Ibhange elisetshenziswayo akufanele libe negatsha elihambisanayo ngaphakathi kwezwe lakho. Ngokuphathelene nezezakhiwo, izinkantolo zasendaweni zingabamba izindlu nomhlaba. Ngakho-ke, ukuba nempahla ethengiswayo ngaphakathi kwe-LLC okungeyokwethenjwa kulungile. Kodwa-ke, lapho into embi idala ikhanda layo elibi kungcono ukuthi uthengise masinyane ukuthengisa izindlu kanye nokuphephezelana ngemali okukuyo ngaphandle kokulahlekelwa yindawo yonke. Njengenye indlela, umuntu angaqopha amanga okuyiqiniso ngokumelene nempahla futhi avale imali evela ku-akhawunti enjalo ngaphakathi kwesakhiwo se-trust / LLC.
Kaningi, sibeka ama-trust kummeli abesebezithengisa kumakhasimende abo. Siphinde sifundise namasemina wokuvikelwa kwempahla kumalungu ezobuchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, sibeka inqwaba yama-trust ngokuthe ngqo kumakhasimende ethu. Izinhlinzeko zokuhlelwa kwezezakhiwo zingangezelelwa trust; uhlobo lwasemthethweni oluthi, "Lapho ngifa konke kuya kumuntu engishade naye futhi lapho sobabili sifa konke kuhamba ngamasheya alinganayo ezinganeni, ngokwesibonelo.
Qaphela umhlinzeki wesevisi oyedwa emakethe onamaqhinga akhe athuthukisa isakhiwo sakhe sokuthembela ngokuhlambalaza zonke ezinye izindlela zokuvikela izimpahla, kufaka phakathi inketho esixoxa ngayo lapha. Uphromotha okwakhe ukwethembana kwendawo okubuthakathaka, okungagcini enkantolo, futhi kubukela phansi konke ukukhetha kodwa okwakhe. Akunasidingo sokusho, akakhulumi ngamacala amaningi afakazela amandla okuthembela eziQhingini zaseCook. Uxoxa ngamacala ambalwa kakhulu lapho amajaji angawulandelanga umthetho futhi anikeze nolaka kubantu abahlala ethembeni. Ngaphezu kwalokho, udansa ngalelo qiniso lokuthi i-trust ivikele izimali zamakhasimende njalo.
Inkinga ekhazimulayo ngenketho ayikhuthazayo ukuthi ukwethenjwa kwakhe kwasendaweni kungasuswa kube njengempukane ngaphansi kwecala lejaji lendawo. Ngakho-ke, ngamandla angafanisiwe akhonjiswa kaningi yiCook Islands, iningi lethu emkhakheni wokuvikela impahla ongenazisusa ezingezinhle sonke siyavuma ukuthi ukwethenjwa okuxoxwe lapha kunikeza, ukuvikelwa kwempahla okunamandla okutholakalayo namuhla.
Shayela nganoma yisiphi isikhathi, amahora we-24 ngosuku, ukuthola eminye imininingwane ngokusetha i-Cook Islands Trust, i-Nevis LLC ne-akhawunti engasaphesheya ukuvikela amafa akho.